Faafahin: Gudaha totelka oo weli ku jira Al-Shabaab iyo Inka badan 50 qof oo lasoo bad-baadiyey - Awdinle Online
Faafahin: Gudaha totelka oo weli ku jira Al-Shabaab iyo Inka badan 50 qof oo lasoo bad-baadiyey
December 10, 2019 (Awdinle Online) –Faafahin dheerad ah ayaa ka soo baxaysa weerarkii hotel SYL waxayna sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weli haysta qaybo ka mid ah hoteelka islamarkaana ay ka dhex dagaalamayaan.
Weerarka ayaa bilwoday daqiiqado ka hor 7-dii fiidnimo ee xilliga Muqdidhso. Waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ay qaar rasaas ku fureen ciidamada ilaalada madaxtooyada halka kuwo kalena ay galeen hoteelka SYL.
Waxaa jira khasaare nafeed oo xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacy balse weli lama hayo tiri rasmi ah.
Waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan laba ka tirsan xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhaawacmeen weerarka, halka qaar kalena lasoo bad-baadiyey.
Mas’uuliyiin ka tirsan saraakiisha amniga ayaa sidoo kale sheegay in 50 qof oo shacab ah laga soo bad-baadiyey hotelka.
Mid ka mid ah saraakiisha ciidanka Soomaaliya Gaashaanle Dhexe Cabdiraxmana Cumar Jeeniqaar oo taliye u ahaan jiray Danab ayaa ku sugnaa hoteelka marka weeraku dhacay. Waxa uu VOA u sheegay in ciidankiisa ay difaaceen isaga iyo dad kale oo badbaaday.
Waxa uu sheegay taliyuhu in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayen qoryaha fudud iyo barmbooyinka gacanta laga rido.
Hoteelka SYL ayaa ku yaalla meel u dhyow madaxtooyada. Hoteelka ayaa laba jeer oo hore waxaa weerar ku qaaday maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Hoteelka SYL ayaa laba jeer oo hore waxaa weerar ku qaaday Al-Shabaab iyadoo uu ka dhashay qasaare kala duwan.
Previous articleWar ku saabsan weerarka Hotel SYL oo kasoo baxay Al-Shabaab
Next articleDableydii Weerartay Totel SYL Oo La Toogtay